Askarigii Milateriga Ahaa Ee Lagu Soo Tababaray Koonfurta Kuuriya Ee Son Heung-min Oo Ku Laabtay London - Gool24.Net
Askarigii Milateriga Ahaa Ee Lagu Soo Tababaray Koonfurta Kuuriya Ee Son Heung-min Oo Ku Laabtay London
May 17, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Toddobaad ka hor ayuu dhamaystay tababare milateri oo muddo saddex usbuuc ah u socday, isaga oo adkaaday oo taatikooyin is-difaac, dagaal iyo mid adkaysi ba soo yeeshay ayuu maanta usoo duulay magaalada London.
Weeraryahanka Tottenham ee Son Heung-min ayaa kusii jeeda magaalada London markii uu soo dhamaystay shaqadii qaranka ee Koonfur Korea, waxaanu ka badbaadi doonaa in lagu sameeyo karantiil haddii tijaabada caafimaad ee lagu sameeyo marka uu gaadho UK ay caddeeyaan inuu ka badqabo fayraska Korona.
Son Heung-min oo lasoo guddoonsiiyey askariga ugu bandhigga fiicnaa ciidankii tababarka milaterinimo la siiyey, waxa uu awood u yeelan doonaa inuu si toos ah tababarka Spurs ula bilaabo marka ay kusoo laabtaan haddii ay shaybaadhadu bad-qab ka dhigaan.
Laakiin Isniinta soo socota ayuu ka bilaabi doonaa magaalada London tababar gaar ah oo uu naftiisa ugu diyaarinayo ciyaaraha Premier League ee la filayo inay dib u bilowdaan horraanta bisha June ee foodda inagu soo haysa, ka hor inta aanu qayb ka noqonin tababarka buuxa ee Jose Mourinho uu ciyaartoyda Tottenham sida wada-jirka ah garoonka iskugu keenayo.
Kooxaha Premier League ayaa loo fasaxay inay sameeyaan tababar ay ciyaartoydu kala fog-yihiin, dushana lagala soconayo inay u hoggaansamayaan shuruucda lagu xakamaynayo fayraska Korona.
Waxa qasab ah in tababarka ciyaartoydu samaynayaan aanu ka badanin 75 daqiiqadood, tababar kastana inta aanu bilaabin la buufiyo calamada, kubbadaha, biraha garoonka ku yaalla sida goolasha iyo doogga sare intaba.
Jose Mourinho ayaa waxa uu dib u helayaa Son Heung-min oo si buuxda uga soo bogsaday gacan uu ka dhaawacmay horraanta bishii March ka hor intii aan fasaxa loo gelin fayraska, waxaanu u adeegsan doonaa halganka ay kooxdiisu u gelayso inay kaalmaha sare boos kaga raadsato.